Ny Taom-Bolamenan’ny Amanin’Ombivavy Any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2016 10:51 GMT
Tavoahangy misy Amanin'Ombivavy Fisotro amin'ny fombafomba ara-pivavahana …..hita ao amin'ny tsena Foibe Mustafa ao Singapaoro. Sary avy amin'i Silke Baron ao amin'ny Flickr . CC BY 2.0
Toa hita mifoha indray ny fisotroana amanin'ombivavy ao India rehefa nomen'ny mpomba ny governemanta Haindò ankehitriny tosika .
Azo amidy betsaka toy ny ronono ny ranoka mavo voadio, ary maro loatra ny tinady hany ka nanome anarana azy hoe “ranoka volamena” ny sampam-baovao Bloomberg tamin'ny fitantarana nivoaka tamin'ny 17 Jolay.
Hetsika ankilan'ny fandehanana any amin'ny [planeta] Marsa,
Lasa Ranom-bolamena ny Amanin'ombivavy miaraka amin'ny Governemanta Modi: Fampitam-baovao vahiny https://t.co/k0zPmqrKuK
Tsy diso tafahoatra loatra angamba ilay hoe “volamena”, raha inoana ny fikarohana nataon'ny mpahay siansa tao amin'ny Oniversiten'ny Fambolena Junagadh ao Gujarat fanjakana Indiana. Nanaitra izao tontolo izao izy ireo rehefa nilaza tamin'ny Jona teo fa nahita volamena tao amin'ny amanin'ombivavy rehefa vita fanaraha-maso ny vokatra.
Misy ny Ivontoerana Nasionaly ao Ayurveda izay nilaza fa manana volamena ny amanin'ombivavy. Nakatona sahady izy ireo! whttps:t.com/wvvTs5wPcz
Manofinofy fomban'alisimia izy ireo ary milaza avy amin'ny hita tamin'ny literatiora fahiny fa afaka mamokatra volamena ny amanin’ ombivavy .
Nahatonga ny olona hiresaka ao amin'ny media sosialy ny fifantohan'ny fampitam-baovao, kanefa ny marina dia tsy zava-baovao ao India ny fametrahana ny amanin'omby vavy ho vokatra, na Gomutra. Manana kolontsaina manaja ombivavy ny Indiana, ary manana dikany manokana amin'ny maha-zava-pisotro azy ny amanin'ilay biby amin'ny Haindoisma. Mino ilay mpanohana ny fitsaboana nentim-paharazana Indiana antsoina hoe Ayurveda fa misy singa manasitrana ao aminy; ary heverina ho fitsaboana ny aretina rehetra ny fisotroana ny amanin'ombivavy, fantatra fa manampy eo amin'ny fitsaboana ny aretina toy ny habokana sy ny homamiadana ilay izy.
Ampiasaina ihany koa amin'ny vokatra toy ny ranon-tsavony fanasana loha (shampoing) sy ny fanasana gorodona ny amanin'ombivavy ary manana anjara asa amin'ny fanaovana zezika biôlôjika. Misy mihitsy aza ny zava-pisotro misy gazy vita avy aminy.
Goodbye Poison; welcome to the divine -Sikkim shows the way! #Kamadugha https://t.co/Fh8Kca1rmw
Veloma ry Poizina ; Tongasoa ny avy amin'Andriamanitra – manoro ny làlana [ny avy ao] Sikkim ! #Kamadugha
Manao ny amanin'ombivavy ho zava-dehibe mazava ho azy ny antokon'ny fitondrana Bharatiya Janata . Mihazona patanty am-polony mifandraika amin'ny amanin'ombivavy ny antoko ary nanome famatsiam-bola 87 tapitrisa dolara amin'ny fampialofana ombivavy. Maro ny fanjakana Indiana no nandrara ny famonoana ombivavy ary nanenjika ireo fivarotan'omby tsy ara-dalàna tamin'i Bangladesh ilay mpifanolo-bodirindrina aminy.
Tamin'ny 2014, nanazava ny tantaran'ny fampiasana ny amanin'ombivavy ao India i Jayan Divakaran tao amin'ny bilaogy Cluster of Thoughts :
Nanome lanja betsaka ny ombivavy ny sivilizasiônantsika fahiny. Tsy nampiasaina fotsiny ho biby fiompy ahazoana ronono sy vokatra isan-karazany ny ombivavy fa hajaina ihany koa sy ivavahana ary heverina tahaka ny Reny nandritra ny andro taloha izay antony nahafantarana ny firenentsika ho tany tondra-dronono sy tantely.
Miankina indrindra amin'ny tain'omby sy ny amaniny ny fambolentsika izay sady atao zezika izany no fanafody ho an'ny voly sy legioma isan-karazany ao India. Nampiasa tain'omby sy amanin'omby ireo tantsaha nandritra ny taona an'arivony maro ka lonaka sy mamokatra bebe kokoa noho izany ny tany ao India raha ampitahaina amin'ny faritra andrefana. […] Maro ireo tantara no natokana ho an'ilay biby manetry tena , nanome lanja lehibe ho an'ny ombivavy ireo, Mpanjaka, ny Andriana Rishis, Maharishis, Brahmin, ireo filozofa sy Ayurveda Acharyas lehibe , izay nahatonga ny firenentsika ho fantatra ho Tanin'ny Ombivavy Masina.
Tsy amidy ao India fotsiny ihany ny amanin'ombivavy, fa any amin'ny firenena maro ihany koa, ary ampiasaina atao fanafody nentim-paharazana any Myanmar sy Nizeria . Hita ihany koa ao amin'ireo tranonkala e-varotra toy ny Amazon ilay izy.
BBC News – Amidy miaraka amin'ny sakafo ao amin'ny toeram-pivarotana ao London ny Amanin'ombivavy
Iray amin'ireo lahatsary maro ity ambany ity izay azo jerena amin'ny aterineto mampiseho ny soa azo avy amin'ny amanin'omby sy ny fomba fisotro azy. Manazava manokana ny fomba fanadiovana ny amanin'ombivavy ilay lehilahy ao amin'ny lahatsary amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vilany cocotte minute.
Na izany aza, toa tsy manohana ny fitakiana ara-pahasalamana ny siansa misy. Mety ho loharanon'ny bakteria sy ny areti-mifindra ny amanin'ombivavy. Hita araka ny fanadihadiana iray fa niteraka fahataitairana ny amanin'ombivavy raha atao kelikely fa fihinjitsinjarana sy/na fahafatesana raha atao betsabetsaka ny fatrany rehefa nampidirina tamin'ny totozy ny amanin'ombivavy .
Moa ve ireo mitonon-tena ho manam-pahaizana mba hametraka ny fitarainany any amin'ny fanaovana fitiliana mahaleotena ny amin'ny singa manasitrana azo avy amin'ny amanin'ombivavy? Sa hijanona hatrany ho fahalalana nentim-paharazana ilay zavatra iray tohizan'ny olona sotroina amin'ny finoana? Hatramin'izao aloha, tsy nizara zavatra betsaka momba ny amanin'ombivavy na teo amin'ny vavahadin-tserasera ofisialy izany na teo amin'ny Twitter ny Minisiteran'ny Ayush izay natsangana tamin'ny 2014 izay natao mba hampandrosoana ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fitsaboana Indiana rehefa nandray ny fitondrana ny Antoko Bharatiya Janata .